च्याउ खान अनुभव र आँट होइन, ज्ञान चाहिन्छ | PaniPhoto
च्याउ खान अनुभव र आँट होइन, ज्ञान चाहिन्छ
पानीफोटो / June 18, 2012 /9Comments
अपडेट : असार ४, २०६९ – बर्षायामको सुरु सँगै च्याउ खाएर ज्यान गुमाउँनेहरुको खबर आउँन थालेको छ । जतासुकै पाइने असुरक्षित च्याउ खाएर ज्यान गुमाउँनेहरुको सूचि यसपाली कति लामो हो भन्न सकिन्न । जेठ ३२ गते बिहान जंगलबाट ल्याएको विषालु च्याउ खाँदा चितवन कविलासपुरको एउटा परिवारका ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । एकजनाको गम्भिर अवश्थामा उपचार हुँदै छ । च्याउ खाएर ३५ वर्षीय बुद्धिबहादुर चेपाङ, उनकी श्रीमती ३० वर्षीया सोमती चेपाङ, उनका छोराहरु ९ वर्षका मानबहादुर चेपाङ र ६ वर्षका सन्तकुमार चेपाङको मृत्यु भएको छ । १८ वर्षीय छोरा अर्जुन चेपाङको भने गम्भीर अवस्थामा भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नोट : लेखमा प्रयोग भएका च्याउका प्रजाती या च्याउका नामहरु वैज्ञानिक नामहरु हुन् ।
सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न पत्रपत्रिका तथा वेभसाइटहरु
प्रथम पटक पानीफोटोमा प्रकाशित : Monday July 18, 2011
July 20, 2011 at 5:26 am / Reply
च्याउका बारेमा यस्ता धारणाहरु साँच्चै नै मानिसको ज्यान लिन सक्छन् । वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित कुरामात्र पत्याउँ र आफ्नो ज्यान जोगाऔं ।
इश्वर मल्ल says:
July 20, 2011 at 5:31 am / Reply
मेरो गाउँमा पनि केही बर्ष अगाडी केटाकेटीले जंगलबाट ल्याएको च्याउ खाएर मान्छे मरेका थिए । केटाकेटीले खेलाएर र हल्लाएर च्याउ नचिनिने बनाएका हुन्छन् । त्यस्तो च्याउ नखान अनुरोध गर्दछु ।
नलिना शर्मा says:
जंगली च्याउले लिन सक्छ ज्यान । होस गरौं ।
जीवन पन्थी says:
यस्तो सूचना सरकारले मिडियामा दिनु पर्ने हो । किन सरकार वास्ता गर्दैन ।
Surya Chemjong says:
June 14, 2012 at 11:31 am / Reply
सरकारले के मात्र वास्ता गरोस् ? पत्रिकामा आकै छ /मिडियाले समाचारमा भनेको भनै छ /मान्छे मन बाँध्न नसक्ने अनि मर्ने/ बेकारमा सरकारलाई दोष/ आफ्नो ज्यान त आफै बचाउँनु पर्यो नि यार !
ध्रुव श्रेष्ठ says:
July 20, 2011 at 5:32 am / Reply
सरकारको कुरा छोडौ मित्र । आफ्नो ज्यान आफै जोगाऔं ।
January 8, 2013 at 9:11 am / Reply
धेरै राम्रो जानकारी दिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद छ . मा एउटा प्रस्न गर्न चाहन्छु , त्यो केभने , के हामीले बजारमा किनेर खाने च्याउ सबै खान योग्य हुन्छन त ? कृपया जवाफा दिनुहोला
January 9, 2013 at 3:30 pm / Reply
दिनेशजी जंगलबाट केटाकेटीले टिपेर ल्याएको च्याउ हाटमा बेच्न राखेको देखेको छु मैले गाउँघरतिर । त्यस्तो त खान भएन । राम्रो बिउको प्रयोग गरेर च्याउ खेतीबाट उत्पादित नकुहिएका त खान हुन्छ नि ।